Etu aga - esi edobe saiti ohuru gi | Martech Zone
Anyị na-niile e been gị na saịtị chọrọ ume. Ma obu ahia gi ka edeputara, saiti a abiala ochie, ma obu na o bughi igbanwe ndi ozo dika ichoro ya. Ndị ahịa anyị na-abịakwute anyị ka anyị nwekwuo ntughari ma anyị na-agakwa ịlaghachi azụ ma weghachite usoro nlekọta weebụ ha niile site na ịkọ aha ọdịnaya. Olee otú anyị si eme ya?
Ejikọtara otu ebe nrụọrụ weebụ n'ime usoro atụmatụ 6, nke ekwesịrị ịkọwa ya nke ọma ka ị mara ebe ị si na ihe mgbaru ọsọ gị bụ:
Platform - kedu teknụzụ eji eme ihe, nnabata, nyiwe, wdg.
Ndị isi ọchịchị - otu esi ahazi saịtị gị.
content - kedu ozi ekwesiri igosi na otu esi eme ya.
ọrụ - onye nweta saịtị na otu esi.
atụmatụ - kedu atụmatụ ndị achọrọ iji gbanwee ndị ahịa nke ọma.
mmesho - kedu ka ị si atụle ihe ịga nke ọma gị ma ọ bụ akụkụ nke mmelite.
Enwere akụkụ dị iche iche na saịtị na otu esi ejikọ ha na atụmatụ azụmaahịa dijitalụ gị. Kedu ka saịtị ọhụrụ ahụ si agbaso atụmatụ ndị a:
Brand - ọdịdị, mmetụta, agba, mkpụrụ edemede, imewe, okwu, wdg ndị na-akọwa saịtị ahụ.
Kpọọ ka emee - gini bu uzo eji eme mgbanwe na kedu ka ndi mmadu ga esi bia?
Ibe akwukwo - olee ebe ndi mmadu ga-agbanwe ma gini bukwara uru nchighari a? Enwere mwekota CRM ma ọ bụ azụmaahịa akpaaka dị mkpa?
content - broshuọ ozi, ụlọ ọrụ nkọwa, pesonel, foto, n'ihu, infographics, na-acha ọcha, pịa a na, arịrịọ ngosi, ndapụta onye ọrụ, downloads, webinars, vidiyo, wdg.
email - ebee ka ndị mmadụ si denye aha, kedu ka ị si achịkwa ndenye aha na iwu SPAM.
search - ikpo okwu, nyocha isiokwu, iwu ulo, ntuziaka ọdịnaya, wdg.
Social - snippets, bọtịnụ ịkekọrịta na njikọ nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya kwesịrị ijikọ ma kwalite na saịtị ahụ.
IHE: Maka mmekọrịta dị mma, jiri ndị ahịa anyị mindmapping ngwá ọrụ ịdepụta ma gbanwee usoro nhazi na usoro iji kwado ịdị mfe ma hazie ọrụ niile n'ime pịrịks 2-3 nke ịbanye na saịtị.
N'ime usoro ọ bụla a, kedụ nkọwa
Kedu ihe saịtị ahụ na-eme ugbu a ị chọrọ ya gaa n'ihu na-eme?
Kedu ihe saịtị dị ugbu a anaghị eme na saịtị ọhụrụ ahụ ga-emerịrị?
Kedu ihe saịtị dị ugbu a na-agaghị eme nke ahụ ga-abụ mma ime na saịtị ọhụrụ?
Na nke ọ bụla n'ime atụmatụ ndị ahụ, mepee akụkọ njirimara maka ndị ọrụ ọ bụla na otu ha si emekọrịta na saịtị ahụ. Agbaji ha n'ime ime ma dị mma ịme. Akụkọ onye ọrụ bụ nkọwa bara ụba nke otu onye ọrụ si emekọrịta yana enwere ike iji ya nnwale nnabata. Lee otu ihe atụ:
Onye ọrụ ahụ nwere ike ịbanye na aha njirimara na paswọọdụ, denye aha maka saịtị ahụ, ma weghachite paswọọdụ ha ma ọ bụrụ na amaghi ya. Ndebanye aha chọrọ aha njirimara, aha zuru oke, adreesị ozi-e na paswọọdụ siri ike (njikọ nke obere okwu, okwu dị elu, nọmba na akara). A ghaghi itinye nkwenye email iji hụ na ejiri adreesị ozi-e dị irè. Onye ọrụ kwesịrị inwe ike gbanwee paswọọdụ ha n'oge ọ bụla na-enweghị nkwado.
Ugbu a, anyị na-abanye na nitty gritty… ị nwere nkọwa nke saịtị gị, otu ndị ọrụ si emekọrịta ya, yana mkpa nke saịtị ọhụrụ ahụ na ihe ọ chọrọ. Iterative development bụ isi - dozie atụmatụ na akụkọ onye ọrụ ka ị wee mara ihe a ga-ebu ụzọ mee site na ihe dị mma ịnwe. Bido ịtụgharị uche maka ebumnuche na akụrụngwa iji setịpụ atụmanya na ihe ịchọrọ na mgbe ịchọrọ ya.
Ndepụta Ngwaahịa saịtị maka ibe. Ọtụtụ mgbe, anyị na-eji scraper mee ka ihe dị mfe.
Peeji nke ọ bụla, kọwaa ụdị ibe peeji a template a ga - achọ iji gosipụta peeji ahụ nke ọma.
ịzụlite waya isi iji chọpụta nhazi peeji na igodo.
Ọ bụrụ na ọnụọgụgụ peeji ga-ebelata (a na-atụ aro ya mgbe niile), kedu ebe ị ga-eme redirect enwere peeji ka ị ghara igbochi ndị ọrụ ma chọọ? Maapụ peeji niile dị ugbu a na ebe ọhụụ.
Zụlite ọdịnaya Mbugharị atụmatụ iji nweta peeji niile dị na peeji nke ọhụụ site na CMS ọhụrụ. Nke a nwere ike ịbụ ihe dị oke mkpa… chọrọ onye ọrụ ntanetị ka idetuo na mado. Ma ọ bụ ọ nwere ike ịbụ mgbanwe nchekwa data dị mgbagwoju anya edepụtara iji webata ozi ahụ.
Mee otu matriks nke ọrụ, ngalaba, nnweta na ikikere site na ibe na usoro. Kewapụ iche na mkpa ịnwe ma dị mma ịnwe.
Mee atụmatụ gị
Ihe omume ọ bụla ga-enwerịrị onye (bụ ọrụ), ihe (a na-eme n'ụzọ zuru ezu), otu (nhọrọ), mgbe (ụbọchị emechara atụmatụ), ịdabere (ọ bụrụ na a ga-ebu ụzọ rụọ ọrụ ọzọ), yana ihe kacha mkpa , chọrọ inwe).
Gwa ndị ọrụ ma nweta nkwekọrịta ha na ọrụ na usoro iheomume.
Gbanwee ya na ihe ndi ozo, ihe ndi ozo, na imeghari.
Nwee onye isi njikwa ọrụ nke na-esochi, mmelite na akụkọ kwa ụbọchị.
Mee nkpuchi n'etiti nyocha ndị ahịa na ụbọchị mmecha gị nwere oge buru ibu iji mee mgbanwe ma ọ bụ mgbanwe. Ọ bụrụ na ewebata atụmatụ ọhụrụ (scope creep), hụ na onye ahịa ahụ matara etu enwere ike isi metụta usoro iheomume yana ihe ọzọ ga-efu.
Gosiputa onye ahia gi na ebe nleghari anya ma gagharịa akụkọ njirimara maka nnabata.
iwekota nchịkọta na saịtị niile maka nsuso ihe omume, njikwa mkpọsa na ntụgharị ntụgharị.
Ozugbo anabatara gị, tinye saịtị ahụ ka ọ dị ndụ, weghachite okporo ụzọ ochie na nke ọhụrụ. Debanye aha saịtị ahụ na Webmasters.
Were a snapshot nke rankings na nchịkọta. Tinye ihe ndetu na nchịkọta ụbọchị e megharịrị saịtị ahụ.
Mezuo atụmatụ gị! Ozugbo saịtị dị njikere
ndabere saịtị ugbu a, nchekwa data na akụ ọ bụla a chọrọ.
Kpebisie ike a atụmatụ nkwụsị n'ihi na mgbe ihe na-agazighị agazi (ha ga-eme ya).
Ịtọ oge /bọchị / oge 'ga-adị ndụ' maka saịtị ebe ndị ọrụ anaghị emetụta.
Gbaa mbọ hụ na isi pesonel na- mara ọkwa ma ọ bụrụ na e nwere windo ebe saịtị ahụ nwere ike ọgaghị - gụnyere ndị ahịa.
Nwee nkwurịta okwu atụmatụ ịnọ iji hụ na enwere ike ịnweta mmadụ niile site na ekwentị ma ọ bụ nkata.
Tinye saịtị ọhụrụ ahụ -ebi.
ule akụkọ njirimara ọzọ.
Unchmepe saịtị ahụ abụghị njedebe. Ugbu a ị ga-enyocharịrị ọkwa, webmasters na nchịkọta iji hụ na saịtị ahụ na-eme dị ka ị zubere. Kpesa izu ọ bụla 2 maka izu 6 ruo 8 na ọganihu. Mee atụmatụ ma melite oru ngo dika. Jisie ike!
Tags: ndaberenkwurịta okwu atụmatụMbugharịatụmatụ saịtị ọhụrụplanatụmatụndabere saịtịMbugharị saịtịakụkọ njirimaraweb imeweatụmatụ weebụwaya
Nnukwu ndakpọ nke ịhazi saịtị! Nke ọ bụla n'ime akụkụ ndị a na-enye ohere maka mkparịta ụka ọzọ.
Nke a ga-adị mma maka usoro s .siri ike!
Ka anyị mee ya! Ikekwe enwere ihe ederede na akwụkwọ akụkọ edepụtara?